Maninona ianao no mila mampiasa vola amin'ny horonantsary vokatra amin'ny tranokala ecommerce | Martech Zone
Maninona ianao no mila mampiasa vola amin'ny horonan-tsarimihetsika vokatra ao amin'ny tranokala Ecommerce anao
Alakamisy Oktobra Oktobra 18, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny horonantsary vokatra dia manolotra ny mpivarotra e-mpivarotra fomba famoronana hanehoana ny vokariny ary sady mamela ny mpanjifa hanana fotoana hijerena ireo vokatra am-perinasa. Amin'ny taona 2021, tombanana ho 82% amin'ny fivezivezena amin'ny Internet no ho fampiasa amin'ny fanjifana horonantsary. Fomba iray ahafahan'ny orinasa eCommerce mialoha izany dia ny famoronana horonantsary vokatra.
Antontan'isa izay mandrisika ny horonan-tsary vokatra ho an'ny tranokalan'ny Ecommerce:
88% amin'ireo tompona orinasa no nilaza fa nampitombo ny tahan'ny fiovam-po ny horonantsary vokatra
Ny horonantsary vokatra dia namokatra 69% amin'ny haben'ny filaharana
81% kokoa ny fotoana laniana amin'ireo tranonkala misy horonan-tsary hijerena
Ny vidéo vokatra dia niteraka fiakarana 127% tamin'ny fitsidihana pejy nahazo azy ireo
Ity infographic, Maninona ianao no mila mampiasa vola amin'ny vidéo androany, manoritra ny tombotsoan'ny horonantsary vokatra ho an'ireo mpivarotra an-tserasera ary manolotra toro-hevitra folo ambony izay hitarika anao amin'ny fizotran'ny fanaovana horonantsary vokatra:
Omano ny paikadinao amin'ny famoronana, fampiroboroboana ary fandrefesana ny fiantraikan'ny horonan-tsarinao vokatra.
Manomboha kely amin'ny famoronana safidy video ho an'ny vokatra amidy indrindra.
Tazomy ny horonan-tsarinao tsotra hampitomboana ny fiangaviana mpihaino marobe.
Tazomy ny horonan-tsarinao fohy ary hatramin'ny farany.
Hatsarao ny pejinao mba hilalaovana ny horonan-tsary fitaovana finday.
Asehoy ny vokatra ampiasaina hanomezana fahatsapana bebe kokoa ny mikasika sy ny fahatsapan'ilay zavatra.
Manatsara ny horonan-tsarinao amin'ny famoahana azy ho azy tranonkala media sosialy.
Ampidiro a miantso amin'ny asa mamporisika ny mpijery mba hividy.
Mampiasà video maribolana na dikanteny hijerena rehefa tsy mandeha ny feo.
Amporisiho ny votoatin'ny mpampiasa avy amin'ny mpanjifa tena izy izay nividy ny vokatra.
Aza hadino ny mamaky ny lahatsoratray hafa sy ny sary momba ny karazana horonan-tsary vokatra afaka mamokatra ianao. Ity ny sary feno:
Tags: horonantsary vokatra be mpividy indrindramiantso amin'ny asahoronantsary vokatra ecommercehoronan-tsary ecommerceSary torohayhoronan-tsary momba ny findayfamokarana irayhalavan'ny horonantsary vokatrapaikadin'ny horonantsary vokatrahoronantsary vokatrahoronan-tsary momba ny vokatra sosialyhoronan-tsary ugcatiny novokarin'ny mpampiasaVideo Captionsdikanteny videohoronan-tsary
Tsy ampy ny fizarana - Maninona ianao no mila paikady fanamafisana ny atiny